Nhau - Kunongedzera Kusvika Kune Ruzivo rwekunze Fenicha
Wicker Rattan Sachigaro
Kudya Sachigaro Tafura Yakagadzwa
Ratidza Kamuri VR
Zvekudya uye Zvokunwa Zvinhu
Kuchenjerera Kusvika Kune Ruzivo rwekunze Furniture
Zuva tenzi rinounza pamwe zvine hungwaru nzira kune ruzivo rwekunze fenicha
Ndosaka tichiedza kugadzira Zuva tenzi fenicha inokwezva uye panguva imwechete inokwezva, nekuda kwechimiro chayo uye zvishandiso zvinoshandiswa, mumwe anogara achida kubata.
Isu tinoteerera kune yega yega ruzivo rweedu ekunze macheya uye patio fenicha.
Isu tinovavarira kugadzira iyo nyaradzo inokodzera vanhu asi vasina kumbofungidzira.
Isu tinotenda zvakasimba maitiro edu ekuvaka hukama nevatengi kuburikidza nekushanda nesimba.
Bhizinesi rinovaka pahukama hwakareba-nguva, kuvimbika, kuvimbana uye kuda kubatsira vamwe. Isu tinotenda zvechokwadi mukuteerera kune zvinodiwa nevatengi nguva dzose zvinopa mhinduro yakanakisa. Chinangwa chedu ndechekupa vatengi vedu basa risingaenzaniswi zvichibva pane zvakakosha zvinotevera: Hunhu, Kuvimbika, Kushingairira.
Vanhu vanoda nemaziso avo uye vanoita pfungwa yekunzwa pavanenge vachishandisa fanicha. Ichi ndicho chikonzero isu tinobhadhara yakawanda yekutarisisa iyo dhizaini dhizaini. Fomu dzakanaka uye kutsetseka ndidzo dzinonyanya kukosha fenicha yekunze. Round mafomu anogadzira akapfava, anotonhorera emukati, achikoka nyaradzo nebasa. Wese munhu arikutsvaga nzvimbo yakanaka yekugara munyika ino. Iyo tekinoroji inofanirwa kuunzwa muhupenyu hwezuva nezuva kuti iwedzere kushanda.
Tora patio rattan wicker chair semuenzaniso, mhando iyi dhizaini inofadza ziso uye inogara iine hushamwari kunharaunda yakatenderedza. Zvinhu zvekutanga zvinoenderana nekuvimbika kwavo uye runako, zvichiwedzera kukosha kune iyo fanicha.
Isu tinoshandisa zvigadzirwa zvealuminium ine rattan, wicker, machira, amburera yezuva uye huni hwepurasitiki. Aluminium chigaro mabheseni anoita ekunze zvigaro mwenje-kurema, kusimba, kushora kwemvura. Fenicha yakadaro inogadzira uye inofema yakasarudzika, yakasununguka mamiriro.
Zviripachena, fenicha yekunze iri kutora kune imwe nhanho yekudyidzana nevaridzi vayo. Isu tinoziva kuti izvi zvicharamba zvichienda munguva pfupi iri kutevera, uye Sun Master anoda kuve pakati peavo. Uye kukudzwa kwedu kukuru kuita.
Tinotenda kuti fenicha yekunze inofanirwa kutanga yashanda. Mhizha uye tekinoroji zvinoita kuti zvinhu zvishandiswe. Iyo fenicha yekunze inokutendera kuti ushandirane zvizere nenzvimbo yekunze nemhepo nyowani uye kupenya kwezuva, kukwidziridza kugadzikana kwako uye kunakirwa kune imwe nhanho.
Post nguva: Mar-17-2021
Kwete. 1 XinCheng South Road, Leping Industrial Area, Sanshui, Foshan City, Guangdong Province, PRChina
Nei Uchisarudza Sunmaster Kunze Fenicha?
Chii chatinofanira kuteerera kana sarudzo ...
Restaurant Project YeZuva Tenzi Furnitur ...
Kuchenjerera Kusvikira Kune Zvidimbu Zvekunze ...
Hupenyu Hunodziya Kunze Kwekunze Nekunze F ...